Isitudiyo Esinesitayela esinovulandi, buka echibini nasengadini - I-Airbnb
Isitudiyo Esinesitayela esinovulandi, buka echibini nasengadini
Pointe aux Cannoniers, i-Mauritius
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Stéphanie
Isitudiyo Esilungisiwe esinethala elibheke indawo yokubhukuda nengadi. Esitezi sokuqala sebhilidi elinamafulethi angu-5 endaweni ekahle ePointe aux Canonnies maqondana nebhikawozi, eduze nezindawo zokudlela, izitolo, isitobhi samabhasi ebangeni lokuhamba eliya eGrand-Baie naseMon Choisy. Ibhishi lomphakathi liyimizuzu emi-3 ngemoto noma ukuma oku-2 ngebhasi.
Lesi situdiyo sinethezekile futhi sinethezekile ngayo yonke into izivakashi ezingu-2 ezingase ziyidinge ngamaholide e-Mauritius. Igumbi lokulala line-air-con kanye nefenisha yasesilingini, usofa othokomele lapho ungafunda khona izincwadi zakho noma ubukele i-TV. Ikhishi lifakwe umshini we-Nespresso, i-toaster, iketela, ihhavini ye-microwave ngesikhathi sakho sasekuseni kuthala lakho eliyimfihlo elibheke ichibi nengadi. Ibhikawozi yama-French ebhekene nomgwaqo izohlinzeka isinkwa esisha namakhekhe amnandi ngisho namasaladi nokudla ngesikhathi sesidlo sasemini.
Emini, ungajabulela ukuphumula ngaphandle engadini ulele ezindaweni ezihlala ilanga ezizungeze ichibi.
Ifulethi lihlanzwa nsuku zonke (ekuseni), ngaphandle kwamaSonto namaholide.
IPointe aux Canonniers iyindawo okuhlala abantu imizuzu emi-5 ngemoto ukuya enkabeni yeGrand Baie, imizuzu emi-3 ukusuka ebhishi laseMon Choisy kanye ne-10 ukusuka esigodini saseTrou aux Biches. Ibhikawozi yaseFrance, izindawo zokudlela, isitolo sewayini, isuphamakethe yasendaweni konke kungaphakathi kwebanga lokuhamba kanye nekhemisi, Isikhungo Sezokwelapha (esivulwa 24/7) kanye nesiteshi sikaphethiloli.
Ibhishi laseMon Choisy liyimizuzu emi-3 ngemoto noma ngebhasi (izitobhi ezi-2) futhi lilungele ukugijima nemisebenzi yolwandle neyamanzi. Ichweba lilungele ukubhukuda. Kulabo abafisa ukujabulela ulwandle lapho kungakhali kakhulu, kungcono ukuhamba phakathi nesonto. Ukushona kwelanga kuhle kulolu hlangothi lwesiqhingi.
Ngisesandleni sakho uma udinga izincomo. Futhi ngingakujabulela ukukusiza ukuhlela ukuhlala kwakho, okuhlanganisa ukudluliselwa kwesikhumulo sezindiza, iseluleko sendawo, iziphakamiso zemisebenzi nemicimbi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Pointe aux Cannoniers namaphethelo